Jaona 8 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Alur Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bengali Bichlamar Bicol Boligara Catalan Cebuano Changana (Mozambika) Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cinghalais Dangme Danoà Drehu Efik Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Frantsay Ga Goujrati Goun Grika Guarani Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hiri Motu Holandey Hongroà Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kamba Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Karen (S'gaw) Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kissi Kongo Koreanina Kreôla any Belize Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Krio Kroaty Kwangali Kwanyama Laosianina Letonianina Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Macua Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mambwe-Lungu Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Marathe Marshall Masedonianina Maya Mooré Myama Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nias Norvezianina Nyaneka Nyungwe Nzema Népali Oromo Ossète Otetela Ourdou Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanianina Rosianina Samoanina Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tajiki Tamoul Tatar Tenin’ny Tanana Alemà Tenin’ny Tanana Alemà Soisa Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Aostralianina Tenin’ny Tanana Aotrisianina Tenin’ny Tanana Bolivianina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Britanika Tenin’ny Tanana Espaniola Tenin’ny Tanana Frantsay Tenin’ny Tanana Grika Tenin’ny Tanana Holandey Tenin’ny Tanana Hongroà Tenin’ny Tanana Indianina Tenin’ny Tanana Indonezianina Tenin’ny Tanana Irlandey Tenin’ny Tanana Israelianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Jamaikanina Tenin’ny Tanana Japoney Tenin’ny Tanana Kenianina Tenin’ny Tanana Kolombianina Tenin’ny Tanana Koreanina Tenin’ny Tanana Kroaty Tenin’ny Tanana Malagasy Tenin’ny Tanana Malezianina Tenin’ny Tanana Meksikanina Tenin’ny Tanana Nikaragoanina Tenin’ny Tanana Nizerianina Tenin’ny Tanana Orogoayanina Tenin’ny Tanana Panamianina Tenin’ny Tanana Paragoayanina Tenin’ny Tanana Perovianina Tenin’ny Tanana Poloney Tenin’ny Tanana Portogey Tenin’ny Tanana Rosianina Tenin’ny Tanana Silianina Tenin’ny Tanana Sinoa Tenin’ny Tanana Slovaky Tenin’ny Tanana Slovenianina Tenin’ny Tanana Soedoà Tenin’ny Tanana Tailandey Tenin’ny Tanana Tseky Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanana Zambianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Afrika Atsimo Tenin’ny Tanan’ny avy any Arzantina Tenin’ny Tanan’ny avy any Costa Rica Tenin’ny Tanan’ny avy any Cuba Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tenin’ny Tanan’ny avy any Ghana Tenin’ny Tanan’ny avy any Goatemalà Tenin’ny Tanan’ny avy any Honduras Tenin’ny Tanan’ny avy any Mozambika Tenin’ny Tanan’ny avy any Nouvelle-Zélande Tenin’ny Tanan’ny avy any Philippines Tenin’ny Tanan’ny avy any Québec Tenin’ny Tanan’ny avy any Salvadaoro Tenin’ny Tanan’ny avy any Taïwan Tenin’ny Tanan’ny avy any Zimbabwe Tetun Dili Ticuna Tigrigna Tiorka Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshiluba Tshwa Tsonga Turkmène Tuvalu Twi Tzotzil Télougou Umbundu Venda Vietnamianina Wallis Waray-Waray Xavante Xhosa Yorobà Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa Éwé
Tsy hita ao amin’ireo sora-tanana Kôdeksa Sinaiticus, Kôdeksa Vaticanus, ary ny Kôdeksa Sinaitika Syriàka ny andininy faha-53 ka hatramin’ny toko faha-8 andininy faha-11. Misy fahasamihafany izy ireo, ao amin’ireo soratra grika sy ny dikan-teny samihafa. Toy izao no voalaza ao: 53 Dia samy lasa nody tany an-tranony avy izy ireo. 8 Nandeha tany amin’ny Tendrombohitra Oliva i Jesosy. 2 Vao nangiran-dratsy anefa ny andro, dia nankao amin’ny tempoly indray izy ka nanatona azy ny rehetra. Dia nipetraka izy, ka nampianatra an’ireo. 3 Ary nisy vehivavy tratra nanitsakitsa-bady nentin’ny mpanora-dalàna sy ny Fariseo teo aminy, ka najoron’izy ireo teo afovoany. 4 Dia hoy ireo tamin’i Jesosy: “Mpampianatra ô, tratra nanitsakitsa-bady ity vehivavy ity. 5 Nandidy antsika hitora-bato ny vehivavy toy itony i Mosesy ao amin’ny Lalàna. Fa inona kosa no lazainao?” 6 Mazava ho azy fa mba hamandrihana azy no nilazan’ireo izany, mba hisy hiampangana azy. Niondrika anefa i Jesosy ka nanoratra teo amin’ny tany tamin’ny rantsantanany. 7 Fa mbola nanontany azy ihany ireo, dia nitraka izy ka nanao hoe: “Izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany.” 8 Dia niondrika indray izy, ka nanoratra teo amin’ny tany. 9 Niala tsirairay anefa izay nandre izany, nanomboka tamin’ny zokiolona, hany ka i Jesosy irery sisa no teo, niaraka tamin’ilay vehivavy natao teo afovoany. 10 Dia nitraka i Jesosy ka nanao hoe: “Nankaiza ry zareo teo, ravehivavy? Tsy nisy nanameloka anao angaha?” 11 Hoy ilay vehivavy: “Tsy nisy, tompoko.” Dia hoy i Jesosy: “Izaho koa tsy manameloka anao. Mandehana, ary aza manohy ny fahotanao intsony.” 12 Koa hoy indray i Jesosy tamin’ireo: “Izaho no fahazavan’izao+ tontolo izao. Izay manaraka ahy, tsy mba handeha ao amin’ny maizina mihitsy,+ fa hanana ny fahazavana manome fiainana.” 13 Dia hoy ny Fariseo taminy: “Ianao mijoro ho vavolombelon’ny tenanao, koa tsy marina ny fanambaranao.” 14 Fa namaly i Jesosy hoe: “Na dia mijoro ho vavolombelon’ny tenako aza aho, dia marina ny fanambarako,+ satria fantatro izay niaviako sy izay alehako.+ Fa ianareo tsy mahalala izay niaviako sy izay alehako. 15 Ianareo mitsara araka ny fitsaran’olombelona,+ fa izaho kosa tsy mitsara na iza na iza.+ 16 Ary raha mitsara aza aho, dia marina ny fitsarako, satria tsy irery aho, fa miaraka amiko ny Ray+ izay naniraka ahy. 17 Voasoratra ao amin’ny Lalànareo koa hoe: ‘Marina ny tenin’ny vavolombelona roa.’+ 18 Izaho mijoro ho vavolombelon’ny tenako ary ny Ray izay naniraka ahy mijoro ho vavolombeloko.”+ 19 Dia hoy ihany ireo: “Aiza ny Rainao?” Ary hoy ny navalin’i Jesosy: “Samy tsy fantatrareo na izaho na ny Raiko.+ Raha nahalala ahy ianareo, dia ho fantatrareo koa ny Raiko.”+ 20 Teo amin’ny toerana fitehirizam-bola+ sy zava-tsarobidy no nilazany izany, raha nampianatra tao amin’ny tempoly izy. Fa tsy nisy nisambotra azy,+ satria mbola tsy tonga ny fotoana voatondro+ ho azy. 21 Koa hoy indray izy tamin’ireo: “Andeha aho, ary hitady+ ahy ianareo, kanefa ho faty ao amin’ny fahotanareo ianareo.+ Ary izay alehako tsy azonareo aleha.” 22 Dia hoy ny Jiosy: “Hamono tena angaha izy no manao hoe: ‘Izay alehako tsy azonareo aleha’?”+ 23 Koa hoy ihany izy tamin’ireo: “Ianareo avy atỳ ambany, izaho avy any ambony.+ Ianareo avy amin’ity tontolo ity,+ izaho tsy avy amin’ity tontolo ity.+ 24 Izany no nilazako taminareo hoe: Ho faty ao amin’ny fahotanareo ianareo.+ Raha tsy inoanareo mantsy fa izaho no izy, dia ho faty ao amin’ny fahotanareo ianareo.”+ 25 Dia hoy ireo: “Iza àry ianao e?” Hoy i Jesosy: “Tsy misy antony tokony hiresahako aminareo akory! 26 Manan-javatra maro holazaina momba anareo aho ary manan-javatra maro hotsaraina. Marina ilay naniraka ahy, ary izay efa reko taminy no lazaiko amin’izao tontolo izao.”+ 27 Tsy azon’izy ireo fa niresaka taminy momba ny Ray izy. 28 Dia hoy i Jesosy: “Rehefa asandratrareo+ ny Zanak’olona+ vao ho fantatrareo fa izaho no izy.+ Ary tsy manao na inona na inona araka ny nahim-poko aho,+ fa araka izay nampianarin’ny Ray ahy no ilazako izany.+ 29 Ary miaraka amiko ilay naniraka ahy, fa tsy nandao ahy ho irery izy, satria manao izay sitrany foana aho.”+ 30 Koa maro no nino azy+ rehefa niteny izany izy. 31 Hoy ihany i Jesosy tamin’ny Jiosy nino azy: “Raha tsy miala amin’ny teniko+ ianareo dia tena mpianatro tokoa, 32 ary ho fantatrareo ny marina,+ ary ny marina hanafaka+ anareo.” 33 Dia hoy ireo: “Taranak’i Abrahama+ ange izahay e, ary mbola tsy andevon’iza na iza mihitsy.+ Koa nahoana ianao no milaza hoe: ‘Ho afaka ianareo’?” 34 Ary namaly i Jesosy hoe: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa andevon’ny ota ireo zatra manota.+ 35 Ary ny andevo tsy mitoetra mandrakariva ao an-trano, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva ao.+ 36 Tena ho afaka àry ianareo, raha ny Zanaka no manafaka anareo.+ 37 Fantatro fa taranak’i Abrahama ianareo. Mitady hamono ahy anefa ianareo,+ satria tsy mahazo vahana ao am-ponareo+ ny teniko. 38 Izay efa hitako tamin’ny Raiko+ no lazaiko,+ ary ianareo manao izay efa renareo tamin’ny rainareo.” 39 Ary hoy ireo: “I Abrahama no rainay.”+ Dia hoy i Jesosy: “Ataovy àry ny asan’i Abrahama raha zanak’i Abrahama ianareo.+ 40 Mitady hamono ahy anefa ianareo, dia izaho izay nilaza taminareo ny marina reko tamin’Andriamanitra.+ Tsy mba nanao izany i Abrahama.+ 41 Ianareo manao ny asan’ny rainareo.” Hoy ireo: “Tsy teraka avy tamin’ny fijangajangana izahay. Iray ihany ny Rainay,+ dia Andriamanitra.” 42 Hoy i Jesosy: “Tokony ho tia ahy ianareo raha Andriamanitra no Rainareo,+ satria avy tamin’Andriamanitra no nivoahako sy nahatongavako eto.+ Tsy tonga araka ny nahim-poko velively aho, fa Izy no naniraka ahy.+ 43 Nahoana no tsy azonareo izay lazaiko? Satria tsy zakanareo ny mihaino ny teniko.+ 44 Ianareo avy amin’ny Devoly+ rainareo, ary izay irin’ny rainareo no tianareo hatao.+ Mpamono olona hatrany am-piandohana izy,+ ary tsy nifikitra tamin’ny marina, satria tsy ao aminy ny marina. Rehefa mandainga izy, dia ny maha izy azy no avoakany, satria mpandainga izy sady rain’ny lainga.+ 45 Tsy mino ahy kosa ianareo,+ satria milaza ny marina aho. 46 Iza aminareo no afaka manaporofo fa nanota aho?+ Ary raha milaza ny marina aho, nahoana no tsy inoanareo? 47 Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra.+ Izany no tsy ihainoanareo, satria tsy avy amin’Andriamanitra ianareo.”+ 48 Dia hoy ny Jiosy: “Tsy marina ve ny voalazanay fa Samaritanina+ tokoa ianao sady misy demonia?”+ 49 Ary namaly i Jesosy hoe: “Tsy misy demonia aho, fa manome voninahitra ny Raiko,+ fa ianareo kosa tsy manome voninahitra ahy. 50 Tsy mitady voninahitra ho an’ny tenako anefa aho,+ fa misy Iray mitady izany sady mitsara.+ 51 Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba ho faty mihitsy izy.”+ 52 Hoy ny Jiosy: “Fantatray tokoa izao fa misy demonia ianao.+ Efa maty i Abrahama,+ ary maty koa ny mpaminany,+ nefa ianao milaza hoe: ‘Raha misy mitandrina ny teniko, dia tsy handia+ fahafatesana mihitsy izy.’ 53 Ianao angaha lehibe noho+ i Abrahama rainay, izay efa maty? Efa maty koa ny mpaminany.+ Fa manao anao ho iza moa ianao e?” 54 Dia namaly i Jesosy hoe: “Tsinontsinona ny voninahitro raha manome voninahitra ny tenako aho. Ny Raiko no manome voninahitra ahy,+ dia izy izay lazainareo fa Andriamanitrareo. 55 Tsy fantatrareo anefa izy,+ fa izaho mahalala azy.+ Raha milaza aho fa tsy mahalala azy, dia mpandainga tahaka anareo koa. Fantatro anefa izy, ary mitandrina ny teniny aho.+ 56 Ravoravo erỳ i Abrahama rainareo noho ny fanantenana hahita ny androko,+ ary nahita izy ka ravoravo.”+ 57 Dia hoy ny Jiosy: “Mbola tsy dimampolo taona akory ianao, koa efa nahita an’i Abrahama ve?” 58 Hoy i Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa mbola tsy ary akory i Abrahama, dia efa nisy aho.”+ 59 Dia naka vato hitorahana azy izy ireo,+ kanefa niafina i Jesosy ary niala tao amin’ny tempoly.